Ithuluzi le counterlink lisebenza kanjani?
Uma udala umkhankaso wokwakha isixhumanisi, udinga ukwazi ukubaluleka kwesixhumanisi oyakhayo. Uma wazi ukuthi u-backlink ufanele kangakanani, ungahlaziya ukuthi kufanele yini imali yakho, isikhathi nemizamo noma cha. Ungakwazi ukuhlola izixhumanisi ezingenayo ngesandla noma ukusebenzisa ithuluzi le counterlink counter. Lesi sihloko sizinikezelwe kuma-value value calculations futhi sinethemba lokuthi kuzokusiza ukuthi uqinise umkhankaso wokwakha umxhumanisi wakho. Ngakho-ke, ake sihlolisise lezi zindlela zokuhlola.
Izindlela zokuphikisana ne-Backlink
Okokuqala kufanele uqaphele lapho udala izixhumanisi kusayithi lakho. Imithombo yewebhu exhumanisa isayithi inquma igunya layo namandla. Amawebhusayithi aphezulu e-PR axhumene nesizinda, kungcono ukuthi ibeke isikhundla ku-Google. Ukuze uthuthukise ukubonakala kwendawo yakho ekhasini lekhasi lokusesha kwe-Google, kufanele ufune ukuthola izixhumanisi ezingenayo kusukela kwimithombo enjalo yewebhu.
Amathuluzi amaningi wezinkampani zangaphandle asiza ukukala ikhwalithi yezixhumanisi ezingenayo. Cishe uzwe ngezinye zazo. Ngincoma ukusebenzisa amathuluzi anjenge-Semalt Web Analyzer noma ama-Ahrefs. Lawa mathuluzi angakunika idatha enembile kunazo zonke emithonjeni yakho yokwakha isixhumanisi. Ngakho-ke noma ngabe ulinganisa lokhu usebenzisa i-DA, i-DR, i-TF, i-CF noma ngandlela-thile thola indlela yombhalo lokhu kuyisici esisodwa senombolo ekunqumeni amandla esixhumanisi (akuhambisani).
Linganisa ithrafikhi yezixhumanisi ezingenayo
Inhloso eyinhloko yokwakha izixhumanisi ezingenayo ukuthola ithrafikhi ehlosiwe ngabo. Yingakho ukulinganisa ukuhamba kwezixhumanisi ezifakiwe kuyadingeka. Uma umthombo wewebhu unemoto eminingi engenayo, kungenzeka ukuthi isayithi elihloniphekile elinika abasebenzisi okuqukethwe okukhulu. Kusho ukuthi izinjini zokusesha cishe zizozibeka kakhulu, zilethe izinga lokuchofoza ngokuphindaphindiwe, ithrafikhi kanye nokuguqulwa.
Ngokuvamile, imithombo yewebhu eyenza imithwalo yezimoto eziningi ithathwa njengegunya elingaphezu kwezizathu ezilandelayo:
I-traffic njengesici sendawo
I-traffic inenzuzo ukubeka ku-Google njengoba le injini yokusesha ihlola igunya lomthombo wewebhu nokuhambisana nenani lezivakashi ezizayo kuwebhusayithi kusuka ekusesheni okuphilayo. Kusho ukuthi isayithi owamukelayo izixhumanisi kusuka kungase lenyuke kwikhwalithi futhi ngaleyo ndlela yenza izixhumanisi eziningi, okwenza isixhumanisi sakho esingenayo sibe namandla ngaphezu kwesikhathi.
Ukuhamba kwemigwaqo efika kwisayithi lakho
Amasayithi anezimoto eziningi azokudala ithrafikhi kuwebhusayithi yakho nge-backlinks. Kuzophazamisa ngokuqinisekile ukuguqulwa kwakho futhi uphakamise igunya lakho emehlweni e-Google. Nakuba kungakanani okunamandla okwamanje okuqhubekayo empikiswaneni. Kodwa-ke, udinga ukuqinisekisa ukuthi uya kumasayithi angaletha ithrafikhi emakhasini akho.
Njalo uma udala izixhumanisi, kudingeka uqiniseke ukuthi uzibeka emithonjeni yewebhu ye-niche efanayo noma efanayo isayithi. Ngaphezu kwalokho, izixhumanisi zidinga ukuhlanganiswa kokuqukethwe okufanele ukunikeza abasebenzisi ukuqonda okucacile ngalokho abazobhekana nakho ngemuva kokuxhumanisa kwakho okungenayo Source .